सिस्ने गाउँपालिकाको कुन समितिको संयोजकमा को को चुनिए ? :: कखरा संवाददाता :: सिस्ने गाउँपालिकाको कुन समितिको संयोजकमा को को चुनिए ?
शनिबार, असार १८, २०७९ ०१:५७:३२
सिस्ने गाउँपालिकाको कुन समितिको संयोजकमा को को चुनिए ?
सिस्ने गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ।
रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाले कार्यपालिका अन्तर्गतका विभिन्न समिति गठन गरेको छ । कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत विभिन्न समिति गठन गरेको हो । सर्वसम्मत तवरबाट समितिका संयोजक तथा सदस्य चयन गरिएको उपाध्यक्ष गोपाल रेउलेले जानकारी दिनुभयो । उपाध्यक्ष रेउलेका अनुसार आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।
सुशासन तथा संस्थागत समिति, अनुगमन समिति, लेखा समिति, न्यायिक समिति, विधायन समिति, स्रोत अनुगमन सिमा निर्धारण समिति गठन गरिएको छ । राजश्व परामर्श समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति अपांग परिचय पत्र तथा समन्वय समिति र विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । गोपाल पुनको संयोजकत्वमा शशिधर बुढा र धनकुमारी बुढाक्षेत्री सदस्य रहेको आर्थिक विकास समिति गठन भएको छ । तिर्था पुन संयोजक, पूर्णबहादुर मल्ल र हेराम खड्का सदस्य रहेको सामाजिक विकास समिति गठन भएको छ । सूर्य नेपाली संयोजक, सपुरी बुढा र विरेन्द्र बस्नेत सदस्य रहेको पूर्वाधार विकास समिति गठन गरिएको छ ।
मिना केसी संयोजक, दलराज घर्ती र थलबहादुर सार्की सदस्य रहेको वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । कृष्णबहादुर खड्का संयोजक, रजबहादुर बुढा र तिर्था पुन सदस्य रहेको सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति गठन गरिएको छ । उपाध्यक्ष गोपाल रेउले संयोजक गोपाल पुन, धनकुमारी बुढा र विषयगत समितिका संयोजक कार्यालय प्रमुख लगायत सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
दलराज घर्ती संयोजक, मिना केसी र रजबहादुर बुढा सदस्य रहको लेखा समिति चयन गरिएको छ । गोपाल रेउले संयोजक, मिना केसी र थलबहादुर सार्की सदस्य रहेको न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । हेराम खड्का संयोजक पूर्णबहादुर मल्ल र सपुरी बुढा सदस्य रहेको विधायन समिति गठन गरिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मी, उपाध्यक्ष गोपाल रेउले लगायत सदसय रहेको स्रोत अनुगमन तथा बजेटका सिमा निर्धारण समिति गठन भएको छ । गोपाल रेउले संयोजक र मिना केसी, कृष्णबहादुर खड्का सदस्य रहेको राजश्व परामर्श समिति गठन भएको छ । गोपाल रेउलेकै संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा गोपाल पुन, सूर्य नेपाली, मिना केसी, कृष्णबहादुर खड्का, तिर्था पुन सदस्य रहेका छन् ।
गोपाल रेउलेकै संयोजकत्वमा अपांगता परिचय पत्र वितरण समन्वय समिति गठन भएको छ । सदस्यमा गोपाल पुन र तिर्था पुन रहेका छन् । कृष्ण रेग्मीको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । बैठकले कृष्णबहादुर खड्कालाई कार्यपालिका प्रवक्ता तोकेको छ भने जेठ १४, १५ र १६ गते गणतन्त्र दिवेश मनाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १३, २०७९ १०:२५
थप स्थानीय सरकार
आठबीसकोट नगरपालिकाका करार कर्मचारीको तलब २ हजार बढ्यो शुक्रबार, असार १०, २०७९
त्रिवेणीको आफ्नै पाठ्यक्रम बिहीबार, असार ९, २०७९
सिस्नेको नीति, कार्यक्रमः डाक्टर पढ्नेलाई ऋण र अनुदान (पूर्ण पाठ सहित) बिहीबार, असार ९, २०७९
सानीभेरीमा गठित शैक्षिक सुधार कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो बुधबार, असार ८, २०७९
जसले स्थायी जागिर त्यागेर ‘जनयुद्ध’ रोजेका थिए मंगलबार, असार ७, २०७९
छैटौं जिल्ला सभाको मार्गदर्शनः २ वर्षमा सबै वडामा विद्युत, ५ वर्षमा सबै वडामा बाह्रै महिना चल्ने सडक सोमबार, असार ६, २०७९
त्रिवेणीमा स्वास्थ्य सम्बन्धि २१ समस्या मध्ये ५ वटा समस्या प्राथमिकतामा परे शनिबार, असार ४, २०७९
मुसीकोट नगर कार्यपालिकामा विषयगत समिति गठन शनिबार, असार ४, २०७९
चाैरजहारीले स्वीकृत नभएका सूचना, विज्ञापन प्रकाशन/प्रशारणको भुक्तानी नदिने बिहीबार, असार २, २०७९